१५ जना नेपाली कलाकार महँगा गाडी चड्छन्, काे हुन् तिनीहरू ? « Dainiki
१५ जना नेपाली कलाकार महँगा गाडी चड्छन्, काे हुन् तिनीहरू ?
१२ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाली सिनेमा क्षेत्रका नायक नायिकाहरू प्राय सबैले गाडीचढेर हिँड्ने गर्छन् । तिनीहरू मध्यका १५ जना कलाकारहरूले सबैभन्दा महँगाे गाडी चढ्ने गर्छन् । ति कलाकारहरू यि हुन्ः
केहि साता अघि मात्रै आयुष्मान देशराज जोशीसंग इन्गेजमेन्ट गरेकी प्रियंका कार्की दर्शकहरुले एकदमै रुचाएइकी अभिनेत्री हुन् । उनि साढे तेत्तीस लाख मूल्य बराबरको टाटाको जेस्ट र असी लाख भन्दा धेरै मूल्य पर्ने हुन्डाईको टक्सन गाडी चढ्छिन । उनि विशेष काम पर्दा मात्र टक्सन गाडीमा हिड्ने गर्छिन्।
केहि समय पहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एकदमै ब्यस्त कलाकारको लुइँटेल आज भोलि अमेरिका बसोवास गर्दै आएका छन । उनि टोयटा ल्याण्ड क्रुजर चढ्छन् उक्त गाडीको नेपाली मूल्य २ करोड हो ।
दिपक राज गिरि
हास्यकलाकार दिपकराज गिरि ‘तितो सत्य ‘ नामको हास्य टेलीशृंखलाबाट चर्चामा आउन थालेका हुन् । पछिल्लो समय उनि टेलिफिल्म छाडेर फिल्म बनाउन लागेका छन। उनको पछिल्लो ४ वटा फिल्ममा सफलता प्राप्त गरेका दिपक मारुती सुजुकीको स्विफ्ट दिजायर चढछन । उक्त कारको बजार मूल्य २९ लाख बराबर छ।
कुनै बेलाकी चर्चित समाचार वाचिका, गायीका, नायीका र पछिल्लो समय राजनीतिमा सकृय कोमल ओली ह्युन्ड़ाईको आइ टेन चढछिन ।
नाइँनभन्नु ल ४, म यस्तो गीतगाउछु , सत्रु गते जस्ता फिल्ममा काम गरका कलाकार कहिले फिल्मबाट त कहिले अभिनेत्री आचल शर्मा संगको सम्बन्धले चर्चामा आउने शाह अड्तीस देखि चालिस लाख सम्म पर्ने निसानाको सन्नी कार चढ्छन् ।
सदावहार नायक तथा निर्माता भुवन केशी गाडी फेरी–फेरी चड्ने कलाकार हुन । अहिले उनि संग ह्युन्डाइको टोयटा गाडी छ अहिले यस गाडीको बजार मूल्य ५३ लाख देखि ५८ लाख सम्म छ ।
प्रदिप खड्का युवायुवतीहरुलाई एकदमै मन पर्ने हिरो हुन्। उनि चड्ने गाडी ‘प्रेम गीत २’का निर्माता तथा कलाकार सन्तोस सेनाले ‘प्रेम गीत २’ रिलिज भएको ५१ दिनको अवसर पारेर उपहार स्वरूप दिएका थिए । उक्त कार सेनले पारिश्रमिक बापत दिएको भनी चर्चा चलेको थियो। प्रदीपले पनि उक्त कार पारिश्रमिक कम उपहार बढी भनेर स्वीकार गरेका थिए ।
रमेस उप्रेती पुराना नयाका हुन्। उनी चलचित्र यसोर्यबाट चर्चामा आएका कलाकार हुन् । उनि अहिले बजार मूल्य ५८ लाख पर्ने ह्युण्डाइको रेड क्रेडा गाडी चढछन् । यो गाडीको उप्रेतीले एक वर्ष अगाडी ५६ लाखमा किनेका थिए ।
रेखा थापा पनि गाडीहरु फेरी–फेरी चड्ने कलाकार हुन् । अहिले उनि ५९ लाख मूल्य पर्ने डाइसात्सुको तेरियस गाडी चढ़छिन ।
चर्चित मोडेल,कोरियोग्राफर, अभिनेता ताम्राकार कियाको स्पोटेज गाडी चढ़छन। उक्त गाडीको हालको बजार मूल्य ८९ लाख पर्छ ।
खतिवडा कमर्सियल फोटोग्राफर हुन् । पछिल्लो समय ऐश्वार्यबाट उनको चर्चा कमाएका हुन् । उनि कियाको स्पोटेज गाडी चढ़छन। उक्त गाडीको हालको बजार मूल्य ८९ लाख पर्छ ।
महानायक राजेश हमाल कुन गाडी चढ्छन् होला भनेर तपाईको मनमा जिग्यासा जागेको नै होला महानायक राजेस हमाल पनि झन्डै ९० लाख पर्ने कियाको स्पोटेज गाडी चढ़छन ।
चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राइ पनि महँगो गाडी चड्ने कलाकार मध्ये पर्छन । उनि अहिलेको बजार मूल्य १ करोड ६० लाख पर्ने टोयटाको र्याप फोर गाडी चढ्छन् ।
अर्जुक कुमार श्रेष्ठ
अभिनेता तथा निर्माता अर्जुन कुमार श्रेष्ठ पनि टोयटाको र्याप फोर गाडी चढ्छन् । अहिले यस गाडीको बजार मूल्य १ करोड ६० लाख पर्छ ।
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १३:०७